Ma Middle Ụwa: agbọpụta Mordor, Titanfall ma ọ bụ Destiny bụ ọkacha mmasị gị video egwuregwu ma ọ bụ ị na-ahọrọ ndị ọzọ nostalgic ịke egwuregwu play dị ka Mario Kart 8 ma ọ bụ NBA 2K15, Ohere inweta bụ ị chọrọ ka ịdekọ ihe kediegwu na-eme (ma ọ bụ na ị na-eme!) N'ime egwuregwu. YouTube jupụtara videos nke gamers egbu Kacha ọhụrụ egwuregwu ma ọ bụ akafiakde ọhụrụ mbipụta na ohuru nyiwe. Olee otú ha na-eme ndị na egwu videos na weghara niile nke ukwu ha ejije? Mfe-mgbe ị mara na nke omume iji na-uru nke ụfọdụ nke ọhụrụ software ngwaọrụ na ike idekọ gị Ịgba Cha Cha ihuenyo effortlessly dị ka ị na-egwu!
Fraps bụ agadi na nọrọ na njikere na dị mfe iji, ọbụna maka Ndekọ Newbies, na-anọgide na ndị kasị ewu ewu oke maka Ndekọ video gameplay. Wezụga ya mfe ọrụ interface, ọ nwere ike na-egosipụta egwuregwu benchmarks na-adị mfe ime mgbanwe maka framerates na sizing. Fraps e mere kpọmkwem na-agba ọsọ mgbe gị egwuregwu na-egwuri egwu na ndekọ na elu àgwà, na ọ na-eme oké ọrụ na ahụ a raara nye ọrụ. Mgbe ụfọdụ ndị ọrụ mkpesa na size nke Fraps faịlụ bụ nnukwu, ị pụrụ iji a ngwa dị iche iche na-mpikota onu faịlụ maka ebugote na òkè.
The liteCam egwuregwu ndekọ software ike weghara gị egwuregwu na ruo 60 fps, ọ ga-idekọ OpenGL na DirectX egwuregwu na ndị ọzọ software ike. Mgbe ị nanị ịhọrọ site na preset igodo ka melite gị ndekọ, nke na-eme ka ọ dịkwuo mfe iji, e nweghị nhọrọ weghara ka gbaa nke ụfọdụ ndị-amasị nwere. Ọ bụ ezie na ọ na-adịghị nwere ezi dị ka ọtụtụ mmezi ntọala na ngwaọrụ dị ka ọtụtụ ndị ọzọ na video egwuregwu ndekọ software, ọ na-emepụta ezi-edu E na ọtụtụ gamers ekele maka ha were.
Wondershare Bụ a multipurpose video software ngwá ọrụ na a wuru na-webcam edekọ nke-enye gị ka mfe weghara na gị kamera. Audio ndekọ a na-mere mfe, zuru okè n'ihi na egwuregwu Player ndị chọrọ ngosi ọkacha mmasị gị egwuregwu na gị na-eso ụzọ. Ọ na-enye wuru na-converters na video nchịkọta akụkọ na-akwado converting na-edezi ọtụtụ dị iche iche video formats gbara ma na gị camcorder ma ọ bụ iphone ma ọ bụ Android. Wondershare Bụ dị iche iche site na ụfọdụ nke ndị ọzọ na ahịa dị ka ọ bụghị nanị na-enye ohere video kpọọ ma na-enyekwa otu njuaka video edezi, video ebugote nhọrọ, ọ na-arụ ọrụ na otutu ngwaọrụ. Nke a na usoro nwere a elu na-agba processor na nza nke iche iche ntọala, na a dị mfe na onye ọrụ-enyi na enyi interface, tinyere ahụkebe video edezi ngwaọrụ mee ka gị na ndekọ fun na mfe. Ị nwere ike ibudata a 30-n'efu ụbọchị ikpe ebe a iji lelee:
Ị na-riri ahụ Diablo 3: Ultimate Ọjọọ Edition? Gosi anya gị na ewere nkà azọpụta ụwa nke ebe nsọ ahu na ihe ịtụnanya dere video si gị egwuregwu. Ndị kasị mma ngwaọrụ ekwe ka ị na-adị mfe bulite gị gameplay videos n'ebe ọ bụla ị ga-amasị ikere òkè.
> Resource> Record> 3 Mfe Nhọrọ maka ndekọ Video Games